Hal milyan oo reer Suudaanta Koonfureed ah oo u qaxay Uganda - BBC Somali
Hal milyan oo reer Suudaanta Koonfureed ah oo u qaxay Uganda
Image caption Dad ka soo qaxay dagaalka South Sudan
Qaxootiga oo badankood ah haween iyo carruur ayaa ka qaxaya colaadda sokeeye ee dalkooda ka taagan. Balse Qaramada Midoobay ayaa sheegeysa in dadaalka ay waddo loo la`yahay maalgelin, tan oo micnaheedu yahay inay la daalaa dhaceyso in adeegyada aasaasiga ah sida cunto, biyo iyo dawo ay la gaarto qaxootigaasi.
Laga soo bilaabo bartamihii sanadkii hore, maalin walba waxaa dalka Uganda u soo tallaabayay in ka badan kumannaan qaxooti Suudaanka Koonfureed ah. Waxayna dadkaasi la imaanayeen xasuusyo kala duwan oo ay ka mid yihin kufsi, dilal loo geestay dadkii ay jeclaayeen iyo weliba xoolahoodii oo laga soo dhacay.
Hase yeshee, iyadoo lagu soo warramaayo in guryaha iyo magaalooyinka qaar ay eber yihin, ayaa haddana waxaa jira dad da' ah, ama xanuunsan iyo carruur yar yar oo ku go'doonsan goobaha uu dagaalka ka socdo.
Image caption Dad ka soo qaxay South Sudan oo soo gaaray Uganda
Uganda waxa lagu ammaanay albaabbada ay u furtay dadka qaxootiga ah ee ka soo jeeda dalka Suudaanta Konfureed ee aadka u dhibaateysnaa, balse waxay caqabad haysataa ha'adaha gargaarka oo aanan heli karin caawinaad ku filan dadka maddaama ay sii kordheyso tiradooda.
Waxaa la dhimay cuntadii la siin jiray, sida BBC-da ay u sheegeen qaar ka mid ah, dadka qaxootiga ahina goobaha caafimadka waxay un ka helaan xanuun baa'biye, dhanka waxbarashada markii la eegana fasal walba waxaa dhigta 200 oo arday oo arddada qaar waxay inoo shegeen in ay aad ugu adag tahay inay fahmaan waxa uu macallinku sheegaayo.
Qaramada Midoobay waxay codsatay 700 oo milyan oo doollar loogu caawiyo dadka dhibaateysan ee qaxootiga ku ah dalka Uganda ee ka soo jeeda Suudaanta Koonfureed, balse waxay sheegeysaa in lacagtaasi ay codsatay ay heshay oo keli ah boqolkiiba 20.
Sudaanta Koonfureed oo diiday guusha jabhadda
Waxaa jira dadaallo lagu doonaayo in wada hadal loogu bilaabo labada nin ee dalkaasi u horseeday dagaalka sokeeye ee Salva Kiir iyo Reik Machar, waxaase la sheegayaa in aysan kulmin in ka badan hal sano, mana cadda qaabka iyo waddada wada hadal loogu bilaabi karo raggaasi balse waxaa cad in dadka Suudaanta Koonfureed ay la tacaalayaan xaaladdii bini'adannimo ee ugu xumeyd.